Ngaphambili: Fumana imbono ekwabelwana ngayo yoNxibelelwano lwakho lweNtengiso | Martech Zone
Ngaphambili liqonga lonxibelelwano lwabathengi elidibanisa ii-imeyile, iiapps, kunye nabalingane kwiqela elinye. Ngaphambili, ilula kuye wonke umntu okwinkampani yakho ukuba nefuthe kumava abathengi.
Umphambili uthanda ukuzicingela njengendawo yokunxibelelana yamaqela athengisa. Ngawo onke amajelo akho okufikelela ebonakalayo kwiqela lakho liphela kwiwindow enye ecaleni kweCRM kunye neenkqubo zokubuyela umva, iPhambili ikunceda uvale ngakumbi, ngokukhawuleza, ukwenza ukuba iqela lakho lokuthengisa:
Yakha ukuhamba komsebenzi ngokuzenzekelayo ngezilumkiso ezikrelekrele zokuhlela izikhokelo ezingenayo, uzihambise kumntu olungileyo, kwaye ubeke phambili ukufikelela kuluntu.
Sebenzisana kunxibelelwano ngexesha lokwenyani kunye setemplate imiyalezo yakho esebenzayo. Lungelelanisa ngokukhawuleza kwisicwangciso kunye nomxholo opheleleyo.
Ingxelo ngomsebenzi wentengiso kunye nexesha lokuphendula ukufumana ukuqonda kufuneka uphucule. Yabela abanini ukuba baphathe ithemba ngalinye ukusuka esiphelweni ukuya esiphelweni.
Hlanganisa I-Salesforce (okanye nayiphi na i-CRM) kwibhokisi yakho engenayo yomxholo opheleleyo ezandleni zakho. Yongeza ukudityaniswa kwesiko nee-API ezivulekileyo zangaphambili.
Iimpawu eziphambili zangaphambili
Iibhokisi zeebhokisi -Iphambili likuvumela ukuba uhlele iibhokisi zebhokisi yakho yokuthengisa ngejelo, i-tier, iJografi, ukungxamiseka- nangona kunjalo, uququzelela amathemba akho, Ngaphambili unokuyenza.
Iimpendulo ezicwangcisiweyo -Ngokungaguqukiyo ubeke olona nyawo lwakho lubalaseleyo phambili kunye neetemplate ze-imeyile ezigcinwe ngokwezifiso ezilungiselelwe amaqondo okuphendula aphezulu.
Uyilo ekwabelwana ngalo -Yila kwaye uhlele ii-imeyile kunye ngexesha lokwenyani ukuze ufezekise ukufikelela kwakho kwaye uphephe ukubhideka emva nangaphambili kuyilo.
Ukuphawula -Thetha ngokukhawuleza neqela lakho kwimeko ye-imeyile nganye yokulungelelanisa ukulungelelanisa kwisicwangciso sakho ngaphambi kokufikelela.
Snooze -Hlala ugxile kwizivumelwano zakho zexabiso eliphezulu ngelixa ungaze ulahle ibhola ekulandeleleni.
Ukufikelela kweCRM -Fikelela kwiCRM yakho ecaleni kwawo wonke umyalezo.
Cela iDemo engaphambili
tags: Uhlalutyo lwe-imeyileisabelo se-imeyileIzimvo nge-imeyilengaphambiliekwabelwana ngayo nge-imeyileekwabelwana ngayo ngeakhawuntiI-inbox ekwabelwana ngayo